I-Silica eFused Melting Dish Quartz Ceramic Crucible
Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zequartz kwaye zenziwe ngetekhnoloji ye-ceramic processing yanamhlanje.
Isetyenziselwa ikakhulu ubushushu obuphezulu bokunyibilika kwealloys ezifana nealloys kunye neplatinam, enokumelana nobushushu obungaphezulu kwama-2000 degrees.
Ingaphakathi elijikelezileyo elisezantsi kwesitya kulula ukukhupha ngokupheleleyo, isixhobo esisebenzayo sokunyibilikisa igolide kunye nesilivere.
I-Silica crucible Ukumelana noBubushushu eFused Silica Quartz I-Ceramic Crucible
1.Izinto eziphathekayo: uninzi lokuqulunqwa yiSiO2 ( ≥ 80%), Al2O3 (≤17%) kunye nezinye yi-3% ( K2O, Na2O, Fe2O3).
2.Isicelo: isetyenziselwa iplatinam, igolide, kunye nokunye ukunyibilika kwealloy yobushushu obuphezulu.
3.Ukuphakama kobunzima, kunye nokuxhatshazwa koxinzelelo ≥70MPa.
I-4.Ukuxhathisa ukothuka kwe-thermal, i-coefficient ephantsi yokwandisa, ukuzinza okuphezulu kobushushu.
5.Ubushushu bokusebenza yi-1350 ° C, ubushushu obuphezulu bokusebenza yi-1600 ° C.
I-6.Ubomi benkonzo ende, ifanelekile ngokukodwa ukutshitshiswa kwe-thermal.
Iimpawu zeQuatrz crucbile Product
I-asidi echasayo kunye ne-alcali eyomeleleyo
Ukuxhathisa ukothuka okuphezulu kwe-thermal
Akukho crack eve emva kwekhulu ukufudumeza ngesiquphe kunye nengqele yequbuliso
Isalathiso soBuchule beQuartz Ceramic Crucible Technique:
Into Iyunithi Isalathiso
Sio2 % ≥99.5
Unizi lolwapho kuyiwa khona g/cm3 1.80-1.90
I-Porosity ebonakalayo % 14-17
Amandla acinezelayo IMPA ≥50
I-Coefficient yoKwandiswa kweThermal × 10-6/℃ ≤0.6
I-Thermal Conductivity w/m.℃ 0.65
Ubushushu bokusebenza ixesha elide (℃) 1100
Obona bushushu bobushushu (℃) 1650
uphawu I-quartz ye-ceramic crucible edibeneyo kunye nesakhiwo esihle, ukuqhutyelwa kwe-thermal ephantsi, i-coefficient ephantsi yokwandisa i-thermal, ukuchaneka komgangatho ophezulu, ubushushu obuphezulu obungaguqukiyo, ukuxhathisa ukothuka kwe-thermal, iipropathi ezilungileyo zombane kunye nokuchasana okulungileyo kokukhukuliseka kweekhemikhali njl.
Isicelo isetyenziswa kakhulu kushishino lweglasi olunzulu, kwishishini lesinyithi, ishishini lombane, ishishini lemichiza, i-aerospace kunye namanye amacandelo.
Ukusetyenziswa kweemveliso ze-quartz ze-ceramic ezihambelanayo Isitena sesango kwisithando somlilo seglasi edadayo, isigqubuthelo sembaleki, i-roller engenanto yeglasi edadayo yomlilo, iglasi yequartz yeceramic roller yesithando somlilo esithe tye, umlomo wamanzi wentsimbi etyhidiweyo, isinyithi sesinyithi kunye nesithando somlilo esinerola enomngxuma, umlomo wamanzi weglasi, i-punch, i-crucible, i-furnace body, i-sulfure, kunye ne-cylinder, i-bar ye-stir, i-basin, i-tube ejikelezayo, i-oven door ye-coke njl. Ukongeza, kwi-missile, i-rocket, i-radar kunye neminye imiba nayo inenani elincinci lezicelo.
* Ukumelana nobushushu obuphezulu, akukho kuqhekeka
* Ukumelana kakuhle ne-thermal chock
* Ukuqhuba kakuhle kwe-thermal
* Ubunyulu obuphezulu kunye nobomi benkonzo ende
Iintsuku ezi-7 zokusebenza kwiimveliso eziqhelekileyo iintsuku ezingama-30 kwiimveliso ezilungiselelwe.
I-Oem okanye i-odm yamkelekile.
Samkela iodolo encinci / iodolo yesilingo kumthengi ukujonga ukuba ngaba iimveliso zifanelekile kwimarike.
Iya kufumaneka kwi-intanethi kwi-almot kwiinkonzo zeeyure ezingama-24 kwinkampani yakho ebekekileyo.
Siyavuya ukuva kuwe kungekudala kwaye siqale ubudlelwane beshishini kunye nenkampani yakho yembeko.
Ubuchwephesha obuxutyiweyo besilica crucible benza eTshayina
I-silica edibeneyo yokunyibilikisa i-crucible